Saraakiisha sirdonka Woyanaha oo shir xasaasi ah kayeeshay 2-Qodob. | ogaden24
Saraakiisha sirdonka Woyanaha oo shir xasaasi ah kayeeshay 2-Qodob.
Magaalada Addis ababa ee xarunta maamulka Woyanaha waxaa shir deg dega laysugu Yeedhay Taliyayaasha ciidamada sirdoonka Woyanaha oo bilihii lasoo dhaafay Ugaadhsi ba’an ay kuhayeen Koox Hubaysan oo aan Haybtooda la aqoon.
Shirkani oo sida xogta aanu kuhelay ay kaqayb Galeen dhamaan Taliyayaasha ciidamada sirdoonka ee maamulada Hoosyimaada kan Addis ababa, ayaa diirada lagu saaray Habacsanaanta iyo kala daadsanaanta Hawlgabka kadhigtay Hay’adaasi oo ah tan ugu muhiimsan Hay’adaha amaanka ee maamulka Woyanaha.
In kaste oo ay Yar tahay xogta Rasmiga ah ee shirkaasi laga Heli karo hadana waxaa la aaminsan yahay in dooda ugu culus ee shirka Hadhaynaysa ay tahay Ugaadhsiga Joogtada ah ee keenay in xubno badan oo muhiim u ahaa Hay’ada Toogasho lagu dilo hadana aan Hal ruux ah loo Qaban Laynta saraakiishaasi.
Sida xogtu sheegayso Ajandaha shirka ayaa waxaa ugu culus 2- Qodob oo kala ah xafidaada sirta Hay’ada sirdoonka oo noqotay Banaan Ool iyo kahortaga iyo xakamaynta dilalka Joogtada noqday ee lagu beegsanayo saraakiisha kala duwan ee Hay’ada, kuwaasi oo inta badan maamulada Hoostaga Addis ababa lagu Laayay.
2-da Qodob oo ah markii ugu Horaysay ee shir noocan oo kala ah looga dooda ayaa muujinaya sida Hay’adaasi oo Laf dhabar u ah maamulka Woyanaha dhaqaale aad u badana uu kabaxayay ay u kala daadatay mudo Hal sana ah wax kayar oo dalkaasi uu kasocday Kacdoon looga soo Horjeedo Hogaanka Jabhada TPLF.